हावामा कसरी उड्न सक्छन् सर्पहरु ? - Aamsanchar
हावामा कसरी उड्न सक्छन् सर्पहरु ?
आमसंचार ,कार्तिक १८, २०७७
काठमाडौँ – सर्पहरु भुइँमा घिस्रिँदै गरेको देख्दा मात्रै पनि धेरैको सात्तो उड्छ । तर ती सर्प हावामा उडेको देखियो भने कस्तो होला रु केही त्यस्ता सर्प हुन्छन्, जो रुखबाट हावामा उड्न सक्छन् । खासगरी दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रमा यस्ता सर्प भेटिन्छन् ।
वैज्ञानिकहरुको एक पूर्वानुमान के थियो भने, लाखौँ वर्ष लगाएर सर्पहरुले उड्ने एक तरिका बनाएका छन् । तर सर्पहरुले उड्न अपनाउने ‘अनडुलेसन’ विधिले उनीहरुलाई सन्तुलित बनाउने गर्छ । अर्थात्, सर्पहरुको ‘ग्लाइड’लाई स्थिर बनाउँछ र खस्नबाट बचाउँछ । साथै उनीहरु तेस्रो बनेर उड्ने गर्छन् । भर्जिनिया टेकका वैज्ञानिकहरुले यसबारे कम्प्युटेसनल मोडेल समेत तयार पारेका छन् । यसबारे पूर्ण अनुसन्धान नेचर फिजिक्स जर्नलमा विस्तृतमा प्रकाशन भएको छ ।